Paositra Malagasy : miroborobo ny fanavaozana | NewsMada
Paositra Malagasy : miroborobo ny fanavaozana
Tsapan’ny rehetra fa mivoatra sy manaraka ny toetr’andro ny Paositra malagasy. Anisan’izany ny fanavaozana ny fotodrafitrasa sy ny hatsaran’ny kalitao omena ny mpanjifa.
Nametraka paikady manokana ny Paositra malagasy eo ambany fiahian’ny minisiteran’ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampandrosoana ny niomerika. Tafiditra ao anatin’izany ny fanavaozana manaraka ny toetr’andro ny birao miisa 250 eto amin’ny Nosy. Anisan’ny tanjon’ity sampandraharaha ity ny fanatonana ny vahoaka sy ny mpanjifa. Nanomboka ny taona 2014 ny fanatsarana sy fanokafana indray ireo birao efa nikatona tany aloha. Nohatsaraina koa ny endrika sy ny fitaovana ampiasaina ao anatiny. Tafiditra ho mpikambana ao anatin’ny filankevi-pitantanan’ny Fiombonambe afrikanina momba ny paositra i Madagasikara sy i Cameroun, nanomboka ny taona 2016.
Manohitra ny fitokonana
Tsy mitsahatra manitatra ny ambaindainy ny Paositra Malagasy, ankehitriny. Nohavaozina manaraka ny toetr’andro ny fitaovana, ny tolotra omena ny mpanjifa sy ny manan-draharaha, indrindra mifanaraka amin’ny fivoaran’ny teknolojia sy ny niomerika.
Miankina aminy sy mila ny tolotra avy any aminy ny fianakaviana sy orinasa maro eto amintsika sy ny any ivelany. Manohitra ny hetsika politika sy ny fitokonana amin’ny endriny samihafa ny sendikàn’ny mpiasa ao amin’ny Paositra malagasy. Tsy hisy ny fivoarana sy ny fandrosoana raha tsy misy ny antoka sy ny fahatoniana.